Brunei sy ny hiran’i Maher Zain · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2010 16:18 GMT
Nahafahan'ny olona maro mikaroka sy mankafy karazankira maro manerana izao tontolo izao ny fiavian'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao. Nitsidika an'i Brunei i Maher Zain, Soedoà izay manana fiaviana Libaney, manao fitetezam-paritra manerana izao tontolo izao hampahafantatra ny hirany ho an'ny mpankafy azy ihany koa. Araka ny hita ao amin'ny Wikipedia,
“Nivoaka tamin'ny voalohany volana novambra 2009 ny rakikirany voalohany ‘Misaotra Anao Allah’ izay ahitana hira 13 sy hira roa fanampiny. Nihoatra ny 4 tapitrisa ny isan'ny nijery ny rakikirany rehetra ao amin'ny youtube.”
Lahatsary ahitana an'i Maher Zain eo am-pihirana ny hirany malaza iray, ‘Barakallah Lakuma’, izay noraisin'ny mpankafiny avy ao Brunei nandritra ny ny fihaonana sy ny lanonam-pifampiarahabana nokarakarain'ny Athirah Management.
Maro ny radio nanaovan'i Maher Zain, izay malaza amin'ny hira miainga avy amin'ny foto-kevitra Islamika, tafatafa tany Brunei. Araka ny heno tao amin'ny Pelangi FM DJ sy izay nosoratan'ny mpamaham-bolongana Zayn Sabri, dia nohamafisin'i Maher ny fananany mpankafy 107.000 avy ao Brunei fotsiny ao amin'ny takelaka Facebook, amin'ny mpankafy mihoatra ny 700.000 amin'ny ankapobeny.
Vance Tan namaham-bolongana momba izany resadresaka tamin'ny radio izany:
“Tonga maro niara-nianoka ny fotoana tao amin'ny Radio Televiziona Brunei ny mpankafy an'i Maher Zain, olona manana ny lazany avy any Libanona, araka ny nolazain'ny deejay miasa ao amin'ny RTB, DJ Zayn Sabri. Niavaka tamin'ny fahazoana mpijery mahatratra iray tapitrisa ny hira an-dahatsary tao amin'ny YouTube mitondra ny lohateny hoe ‘Insha-allah’ . Nandritra ny tafa fohy nifanaovana tamin'ny alalan'ny Facebook no nanamarihan'i Zayn fa tena manana aingam-panahy tokoa i Zain ho an'ny rehetra…indrindra ho an'ny tanora’. Nampiany moa fa “Tsy maintsy niondrika teo anatrehany nanome toerana azy indrindra amin'ny fandaharan-kira ny mpanankato iraisam-pirenena hafa ato amin'ny Pelangi FM.’ Azo heverina fa nametraka lova ho an'i Brunei ny resadresaka nifanaovana tamin’ i Maher Zain tato amin'ny Pelangi FM, ary mipetraka ho tantara ny resaka nifanaovana tamin'izany.”
Ranoadidas indray mahita fa nanana ny akony tany Brunei ny fandalovan'i Maher Zain, indrindra teo amin'ny tanora
“Tao anatin'ny roa andro fotsiny, dia efa ampy ny fanentanana teo am-boalohany hampahafantarana fa ho tonga eto Brunei Darussalam ilay olomangan'ny hira Maher Zain hihaona amin'ny mpankafy azy. Nampiaiky volana ny valinteny tao amin'ny Twitter sy ny Facebook rehefa nanambara aho fa ho avy amin'ny fomba ofisialy any Brunei izy.”
Nanam-potoana hiresadresaka tamin'ny olo-malaza i Ranoadidas hanontaniana ny fihetseham-pony momba an'i Brunei sy ireo mpakafy maro dia maro. Toy izao ny fahamaroan'ny fanontaniana avy amin'ny mpisioka an-tserasera (Twitteriana)
Rano: namaky tamin'ny iray tamin'ny resadresaka nifanaovana taminao aho fa very tao amin'ny “mozika” ianao indray mandeha. Afaka manazava bebe kokoa ve ianao?
Maher Zain: Tsapako fa misy zavatra tsy ampy. Nieritreritra lalina aho. Niverina nankany Soeda aho ary nentin'ny namako tany amin'ny moske tany Stockholm. Avy eo nanokatra ny foko ho an'ny rahalahiko aho ary tena faly aho fa nitari-dalana ahy i Allah. Nandany fotoana maromaro mihitsy aho nanao fanitsiana rehefa nitsahatra tamin'ny hirako sy ny asako vetivety. Avy eo tsapako misy ny zavatra azoko atao hitondra hafatra tsara, ny eritreritro, ny reviko amin'ny alalan'ny mozika. Teo aho no nifandray amin'ny orinasa mpandrakitra ny hirako Awakening Records ary dia lasa tantara ny ambiny.
Rano: Manana olana ve ianao rehefa mankany amin'ny firenena tandrefana toa an'i Etazonia? (fanontanian'i @zul277)
Maher Zain: Alhamdulillah, hatramin'izao aloha tsy misy ny olana. Raha tena mihaino ny hirako ry zareo, miezaka ny hampiseho ny endrika kanton'ny Islamo izahay. Misy ifandraisany betsaka amin'ny fiadanana, amin'ny fitiavana, amin'ny mahaolona sns ny hirako. Efa nisy ny nandehanako nankany Etazonia ary hitety faritra any koa aho amin'ity taona ity. Hatramin'izao tena tsara.
Rano: Inona no tena manainga fanahy anao rehefa miantsehatra an-kira? (Fanontanian'i s_a_m1995)
Maher Zain: Te-hifampizara izay henoko sy niainako aho ary te-hisaotra an'i Allah ary izay no iantsoana ny rakikirako hoe Misaotra Anao Allah. Misy foana ny aingam-panahy rehefa manao zavatra tsara. Te-hampita hafatra aho ary hanainag fanahy ny olona.
Rano: Oviana indray ny rakikira manaraka? Inona no azon'ny mpankafy antenaina?
Maher Zain: Somary ho hafa kokoa ny rakikira faharoa fa mbola hiompana bebe kokoa amin'ny adihevitra Islamo, reny, finamanana sns. Tahaka ny fonosan'entana iray io. Hivoaka amin'ny herintaona ny rakikira manaraka ka insyaAllah dia hisy fiteny samihafa tahaka ny hita ao amin'ny iTunes ankehitriny sady fiarahamonina iray lehibe avy amin'ny fiaviana samihafa rahateo isika. Izany no mampiseho fa lehibe ny Islamo fa tsy hoe Arabo ihany.
Randomly techno sy Kinsella dia mamahambolongana hoe tahaka ny ahoana ny fomba fikasihan'ny hiran'i Maher Zain ny fiainan'olona maro. Mamaham-bolongana momba ny nitsidihan'i Maher Zain tao amin'ny radio Uni i UBDStudentaffairs.I Geek in White moa dia namoaka lahatsary tamin'ny resadresaka natao tao amin'ny Kristal FM.
Manamafy ny lazan'i Maher Zain ny fitsidihany tany Brunei farany teo. Mbola mibahana any amin'ny radio maro any an-toerana ny hirany hatramin'izao. Hitan'ny Brioneana maro ho endrika iray mampiely ny fitiavana sy ny finoana manerana ny tany amin'ny alalan'ny mozika izy.